I-Free State Stars ijabhise eleKe Yona | Isolezwe
I-Free State Stars ijabhise eleKe Yona
ezemidlalo / 10 September 2018, 09:32am / ZAKHELE XABA
ULUNATHI Mdatyulwa weKe Yona Team ejabulela igoli alishaye bebhekene neFree State Stars eMakhulong Stadium, izolo. Isithombe: BACKPAGEPIX
Nedbank Ke Yona (1) 1
LIHLULEKE sekuthenjiwe iqembu leNedbank Ke Yona likhala ngaphansi kompetha beNedbank Cup, iFree State Stars, eMakhulong Stadium, eTembisa, izolo ntambama.
Amagoli eStars ashaywe uYusuf Jappie no-Eleazar Rodgers esiwombeni ngasinye, eleKe Yona labekwa enethini nguLunathi Mdatyulwa kwesokuqala.
Bekungokwesithupha iqembu leKe Yona lidlala nompetha beNedbank Cup. Alikaze liwine. Nyakenye libhekene neSuperSport United, liqophe umlando lishaya igoli okokuqala nokwenze abaqeqeshi balo u-Ephraim “Shakes” Mashaba noKhabo Zondo bathemba ukuthi bangase bathole iwini okokuqala izolo. Emaqenjini eselibhekane nawo leli qembu, eliyinhlanganisela yabadlali abathungathwa kuzona zonke izifundazwe, kukhona i-Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns naMatsatsantsa.
IStars iqale umdlalo ngeqembu eliqinile elinabadlali abaningi abajwayele ukudlala. Kwabathole ithuba eliyivela kancane esikimini somqeqeshi uLuc Eymael kubalwa nonozinti uSamkelo Mbambo owayevimbela iThanda Royal Zulu.
I-Ea Lla Koto ayisichithanga isikhathi yakhombisa ukuthi ifuna ukulicindezela iqembu leKe Yona eligcine selenza amaphutha. Unozinti weKe Yona, uThabo Mogotsi uvimbe uJudas Moseamedi ephindelela ebhokisini sekuvalwe amehlo. Nokho kuncane abengakwenza ebholeni likaJappie eliqabule inethi ngomzuzu wesihlanu umdlalo uqalile emuva kokuthi iqembu leKe Yona lihluleke ukukhipha ibhola ebhokisini. Emuva kwemizuzu emibili, iqembu leKe Yona lishaye igoli lokulinganisa ngonyawo lukaMdatyulwa, odabule udonga lweStars washaya umgundatshani ohamba kancane wasala enkemile uMbambo. Emuva kokungena kwamagoli womabili, umdlalo ubonakale usulingana, iStars yayeka ukucindezela. UMogotsi uphinde watakula iqembu leKe Yona echithela ngaphandle ishodi likaNyiko Mobbie.
Esiwombeni sesibili, u-Eymael uqinise iqembu lakhe efaka uRodgers noWilliam Twala endaweni kaMoseamedi noJappie. Nokho iqembu leKe Yona liqhubekile nokuhlasela. Ngomzuzu ka-74 uRodgers ungqofele phakathi ibhola ebelikade ligotshwe nguHarris Tschilimbou kwesokunxele.
Bonke abadlali abawu-16 beqembu leKe Yona bazofakwa emaqenjini e-Absa Premiership baziqeqeshe nawo ngenhloso yokuzitholela izinkontileka.